Bursa ရဲ့မီးရထားလမ်းဟာအမြင့်ဆုံးအဆင့်မဟုတ်တော့ဘူး - RayHaber
[20 / 10 / 2019] တနင်္လာနေ့တွင် IMM မှ Haydarpasa တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း!	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[20 / 10 / 2019] Metro Istanbul,2ပျက်ကွက်နှင့်ပတ်သက်။ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[20 / 10 / 2019] KARDEMİRမှရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်အတွက်ထုတ်ကုန်အသစ်	78 Karabük
[20 / 10 / 2019] ဘာကြောင့်ဒီရထားတွေပျက်နေတာလဲ	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[20 / 10 / 2019] Eskişehirရထားဘူတာသည်မူရင်းနှင့်အညီထပ်မံလည်ပတ်မည်	26 Eskisehir
[20 / 10 / 2019] Izmir ရှိ Mukhtars သို့အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး	35 Izmir
[20 / 10 / 2019] ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး inzmir ရှိပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 1 Kuruş	35 Izmir
[20 / 10 / 2019] Akçarayဆေးရုံကိုဖွင့်လှစ်သည့်တိုင်အောင်ပြီးစီးမည်ဖြစ်သည်။ !	41 Kocaeli
[19 / 10 / 2019] Konya အပြာရောင်ရထားဇယား၊ လက်မှတ်စျေးနှင့်လမ်းကြောင်းများ	35 Izmir
[19 / 10 / 2019] Ankara မြေအောက်ရထားအတွင်းဟောင်းနွမ်းသို့မဟုတ်ဟောင်းနွမ်းသောသံလမ်းသက်တမ်းတိုး	06 တူရကီ
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး16 BursaBursa ရဲ့မီးရထားလမ်းဟာအမြင့်ဆုံးအဆင့်မဟုတ်တော့ဘူး
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 16 Bursa, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
Night ken TCDD ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုကြည့်နေစဉ် 2019 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်စာမျက်နှာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ထို့အပြင်စာမျက်နှာပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုတွေ့ရ။ ကျွန်ုပ်တို့အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။
TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှု 1 သြဂုတ်လတွင် 2019 သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပဉ္စမတည်းဖြတ်မူကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
တနည်းအားဖြင့်သြဂုတ်လအထိမြန်နှုန်းမြင့်ရထားအနေဖြင့်အစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သောBandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli စီမံကိန်း၏အမည်သည်ပြန်လည်တည်းဖြတ်မှုနှင့်အတူအဆင့်မြင့်ရထားလမ်းသို့ပြောင်းလဲသွားသည်။
တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်ပြီးKayaş-Ankara-Sincan၊ Sincan-Esenkent၊ Esenkent-Eskişehir, Eskişehirဘူတာရုံကိုဖြတ်ကူးခြင်း၊ Eskişehir-önönü, önönü-Vezirhan, Vezirhan-Köseköy, Köseköyရထား၊ Eskişehir-önönü, önönü-Vezirhan, Vezirhan-Köseköy၊ ထိပ်မှာ။
Ankara-Sivas, Ankara-Polatli-Afyon-Usak-Manisa-Izmir နှင့် Yerkoy-Kayseri လိုင်းများကိုမြန်နှုန်းမြင့်ရထားအမျိုးအစားတွင်ဖော်ပြထားသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်တွင် High Standard Railway အနေဖြင့်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားအမျိုးအစားရှိ Osmaneli-Bursa လိုင်း၏အမည်ကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်ဘာကိုဆိုလိုသနည်းဟုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသိသောသူများအားမေးမြန်းခဲ့သည်။
ထပ်မံ၍ မြန်နှုန်းမြင့်ရထားတည်ဆောက်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်မြင့်တက်လာသည်။ သူတို့က
Yolcu ခရီးသည်ရထားနှင့်ကုန်တင်ရထားနှစ်မျိုးလုံးသည် Bursa line တွင်ပြေးဆွဲမည်။ ထို့ကြောင့်ဤနေရာသည်သမားရိုးကျလိုင်းအတန်းဖြစ်လာသည်။ "
TCDD သည်နေ့၏အခြေအနေနှင့်အမြန်ရထားအမြန်ရထားများအလုံအလောက်ပေါ် မူတည်၍ ရွေးချယ်သည်။
TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန၏ 1 သြဂုတ်လတွင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော 2019 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အရBandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli High Standard Railway Project သည် 180 ကီလိုမီတာလိုင်းများပါ ၀ င်သည်။
ရှယ်ယာအားလုံးဖြစ်သော3သည် TL သန်းကုန်ကျမည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ ၎င်း၏ 1 ဘီလီယံသည် 940 သန်း 508 တွင်ပေါင်တစ်သိန်း၊ 2018 သန်း 252 ပေါင်သည် 010 တွင်သုံးစွဲခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းအသုံးစရိတ်သည် 2019 ဘီလီယံ2သန်းပေါင်ဖြစ်သည်။
ထပ်မံ၍ ဆောက်လုပ်မည့်Yenişehir-Osmaneli လိုင်းနှင့် Bursa-Yenişehirမျဉ်းအား superstrructure-electromechanical တင်ဒါဖြင့်ကြေငြာလိမ့်မည်။
အရေးတကြီးတုံ့ပြန်မှုများ - လာမည့်လတွင်ရထားတင်ဒါဖျက်သိမ်းလိုက်သည်
ဤကော်လံများတွင်…Yenişehir-Osmaneli လိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်3ဘီလီယံ 2018 ပေါင်သန်းတင်ဒါအတွက်တင်ဒါအား Bursa-Yenişehirလိုင်း၏ superstrructure နှင့် electromechanical လိုင်းနှင့်အတူဖျက်သိမ်းခဲ့ကြောင်းတနင်္လာနေ့နှင့်မနေ့ကကြေညာခဲ့သည်။
ဇွန်လ 2018 တွင်တင်ဒါတင်မြှောက်ခြင်းကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအခက်အခဲကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်သည်4ပေါင်ဘီလီယံမကျော်မှီကတည်းကဖြစ်သည်။
ဘီပါတီမှ AK Party Bursa လက်ထောက် Dr. Recep Tayyip Erdogan တူရကီရဲ့ Mustafa Esgin ဆောက်လုပ်ရေးဘဲဂရိတ်-ဆာရာယဗေိုအဝေးပြေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး Cahit Turhan groundbreaking အခမ်းအနားနုဖျက်သိမ်းခြင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ ယူဆ
Bursa ရထားများအတွက်2အလုပ်နေရာရှိသည်
တကယ်တော့…ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်တွင်အဆင့်မြင့်မီးရထားအဖြစ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော Bursa ရထားအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များသည်လည်းစီးပွားရေးအခြေအနေကိုဖော်ပြသည်။
အစီအစဉ်တွင်, 2019 သာ 252 ဘီလီယံ 10 ဘီလီယံအသုံးစရိတ်အတွက်အသုံးစရိတ်မြင်ကြ, ဤအခြေအနေဆောက်လုပ်ရေး site ပေါ်တွင်ထင်ဟပ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်Demirtaş Viaduct နှင့် Ring Road of Kazıklıconcreteရိယာတွင်ကွန်ကရစ်လောင်းခြင်းများသာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူလည်းအလုပ်လုပ်နေသည့်4အလုပ်သမားနှင့်သူလမ်းလျှောက်နေသည်။ (အဖြစ်အပျက် - Ahmet ထင်ပေါ်ကျော်ကြား Yilmaz)
အမြင့် Standart Atıldıနှင့်အတူဥရောပမီးရထားကော်နက်ရှင်သည်လက်မှတ်ပေါင်း 11 / 06 / 2019 ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဘို့အမြင့် Standart လက်မှတ်နှင့်အတူဥရောပမီးရထားကော်နက်ရှင်: ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦန်ကြီးအမ် Cahit Turhan, Halkalı-KapıkulမီးရထားHattı`N၏ဝန် bearing စွမ်းရည်, Çerkezköyဒါဟာ (အီးယူ) -Kapıkul၏ဆောက်လုပ်ရေးဥရောပသမဂ္ဂ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်, ဖြတ်တောက်သိသိသာသာတိုးမြှင့်မည်ဟုဆိုသည်ဥရောပနိုင်ငံများတွင်အသုံးပြုသောလိမ့်မည်သည့်စီမံကိန်းကို 275 ယူရိုထောက်ပံ့ကြေးမြင့်မားစံဖို့ဆုံမယ်လို့ရထားလမ်းပြီးစီးအပေါ်သို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဝန်ကြီး Turhan, Halkalı-Kapıkulမီးရထားလိုင်းစီမံကိန်း Çerkezköyအဆိုပါလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနား, အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်, Marmaray ရထား Tube ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, Yavuz Sultan Selim တံတားမှာသူ၏မိန့်ခွန်းထဲမှာ-Kapıkulပုဒ်မဆောက်လုပ်ရေးစာချုပ်, မြောက်ကိုရီးယား Marmara ကားလမ်းနှင့်ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကဲ့သို့သောတဦးတည်းကိုပိုမိုသစ်ကိုအဓိကစီမံကိန်းများကိုထည့်သွင်းခံရဖို့နှစ်သက် ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Altepe အခုဆိုရင်ကျနော်တို့မြန်နှုန်းရထားက Metro ဓါတ်ရထား (ဗီဒီယို) မထုတ်လုပ် 12 / 03 / 2013 နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Altepe အခုဆိုရင်ကျနော်တို့မြန်နှုန်းရထားက Metro ဓါတ်ရထား Bursa တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Recep ALTEPE မထုတ်လုပ်, ကျနော်တို့မြန်မထုတ်လုပ်မက်ထရို, ယခုတွင်သင်သည် Konya လမ်းရထားထံသို့မလာနိုငျ ... သင့်ရဲ့ program ကိုပြောပြရထားကဆိုသည်။ စက်မှုဇုန် Bursa ၏မြို့အဖြစ်ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာမရှိတော့အရာအားလုံးထုတ်လုပ်နိုင်နှစ်ဦးစလုံး။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဒေသခံအစိုးရများကခုန်စေရန်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ရဲ့မြူနီစီပယ်ပစ်မှတ်ထားပါပြီ။ ကျနော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းကဆိုပါတယ်ငါတို့သည်ပြုလေ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးမှုးကိုလည်း Bey ရွှေ့ဆိုင်း Konya တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်သွားရောက်ခဲ့သည်။ ဆော့ဖ်ဝဲအပါအဝင်ကျနော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းမော်တော်ယာဉ်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်လလက်မှတ်မဟုတ်တော့လေလံဝင်နိုင်ပါတယ်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ စက်မှုအဖွဲ့အစည်း R & D ယူနစ်ရှိပါတယ်။ စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု ...
တရုတ်နိုင်ငံ၏မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းနှင့်အဝေးပြေးလမ်းတံတားများအလျင်အမြန်တိုးပွားလာနေသည် 07 / 11 / 2017 တရုတ်နိုင်ငံတွင်တိုင်းပြည်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံလျှင်မြန်စွာခေတ်မီအရည်အချင်းပြည့်ကြီးထွားအောင်ရည်ရွယ်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအသွင်ကူးပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာခေတ်မီလုပ်ငန်းစဉ်၏အဓိကကျောရိုးသစ်ကိုအဝေးပြေးလမ်းမကြီးများနှင့်ခရီးသည်ရထားလမ်းလိုင်းများဖန်တီးဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရာရှိများအဆိုအရတနင်္ဂနွေကပြောပါတယ်, တရုတ်, အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများနှင့်တံတားများကျော်တစျထောငျ 800 10 တထောင်ကီလိုမီတာသူမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းတံတားတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဟူဘေးပြည်နယ်တထောင်တံတားများတရုတ်တလွှား 2016 805 ရှိကွောငျးဝူဟန်မြို့၌ကျင်းပခဲ့ပါသည်အဆင်းလှသော၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတံတားမြို့တော် Zhou ဝေ, 300 နှစ်ပေါင်းရဲ့အဆုံးမှာပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ Chief Engineer မှာ Speaking ကဆိုသည်။ Zhou အဆိုအရကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးကြိုး 10 ဆွဲထား ...
Trabzon High-Speed ​​ကိုရထားရထားအရှိန်မြှမည်မဟုတ် 26 / 03 / 2016 Trabzon: AK ပါတီ Trabzon ပြည်နယ်ကိုသမ္မတ Heydar Revi, ပို့ဆောင်ရေး, သင်္ဘောများနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ Revi, မိမိကိုယျကို Trabzon အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများတွင်ဝယ်လိုအားအတွက်ဝန်ကြီးနှင့်ဆက်စပ်သောအားလုံးစီမံကိန်းများကိုပြောပြတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ AK ပါတီ Trabzon ပြည်နယ်ကိုသမ္မတ Heydar Revi, တူရကီအတွက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ bulunarak အလည်အပတ်ခရီး Trabzon များအတွက်အရေးကြီးသောနေသောစီမံကိန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးအာဏာပိုင်များနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ရသည်။ ဤအဆွေးနွေးပွဲပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim တစ်ခုမှာအတူရှိ၏။ Revi, အင်တာဗျူးနှင့် ပတ်သက်. bulunarak အကဲဖြတ်, "ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ကြီး Binali Yildirim နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ လက်ထောက်ဤအစည်းအဝေးနှင့်မြို့တော်မြို့တော်ဝန်မစ္စတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြင့်လိုက်ပါသွား ...
အလွန်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားနူးညံ့ | အလွန်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားအစုံတင်ဒါ၏တူရကီ-Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်း6အရေအတွက်ကဖန်ဆင်းခဲ့သည် 16 / 11 / 2012 အလွန်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားနူးညံ့: တူရကီ-Konya အမြင့်မြန်နှုန်းမီးရထားလိုင်းဟာ6ကုမ္ပဏီတစ်ခုကကမ်းလှမ်းမှုကိုအပါအဝင်နုအတွက်4စုစုပေါင်းအလွန်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထား set ကိုဝယ်ယူမှ, တရုတ် 263 သန်း 510 တထောင်နိမ့်ဆုံးလေလံအတူ CNR ထံမှကုမ္ပဏီထံသို့ လာ. စဉ် 757 လုပ်ပါ။ တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏သမ္မတနိုင်ငံ (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှု, တူရကီ-Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထား (YHT) ကိုလိုင်းနှင့်6ကုမ္ပဏီတစ်ခုကကမ်းလှမ်းမှုကိုအပါအဝင်နုအတွက်အလွန်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထား set ကိုဝယ်ယူအတွက်လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၏အရေအတွက်တိုးမြှင့်ဖို့အရေအတွက်က4နိုင်ရန်အတွက်ကြီးထွားလာဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံရန်, နိမ့်ဆုံးအနေဖြင့် 263 510 တထောင်သန်းကမ်းလှမ်းရန်တရုတ်ကုမ္ပဏီ CNR 757 ထံမှဘူးမြို့သို့ရောက်လေ၏။ TCDD တူရကီ-Konya ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်လိုင်း2။ အဆင့်လိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်းများအတွက်အစိတ်အပိုင်းများထောက်ပံ့ရေးနှမြော
21: အောက်တိုဘာလ 10 00 @ - 11: 00
22: အောက်တိုဘာလ 10 00 @ - 11: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Angle လမ်းညွှန်ပြားဝယ်ရန်ပါလိမ့်မယ်
ဝက်ဘ်ဆိုက် Facebook က Instagram ကို တွစ်တာ
ဂျော်ဒန်တွင်ကျင်းပသော Documents Ser ပြပွဲနှင့်အတူသမိုင်းဝင် Hejaz မီးရထား။
IETT Metrobus မတော်တဆမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်အစီအမံများ
တနင်္လာနေ့တွင် IMM မှ Haydarpasa တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း!
Metro Istanbul,2ပျက်ကွက်နှင့်ပတ်သက်။ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Boğazköprüလမ်း၊ Bünyanဖလှယ်ရေးနှင့် Derevenk Viaduct ဖွင့်ပွဲ
Karaman အတွက်လမ်းဆုံမှာ Mirrorred အတိုင်းအတာ
Izmir ရှိ Mukhtars သို့အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး inzmir ရှိပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 1 Kuruş
ယနေ့သမိုင်းတွင် - 20 အောက်တိုဘာ 1885၊ အန်ကာရာဗီလာetသတင်းစာ
Konya အပြာရောင်ရထားဇယား၊ လက်မှတ်စျေးနှင့်လမ်းကြောင်းများ
TÜLOMSAŞရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ရာထူးပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများအားပြင်ဆင်ခြင်း
နိုင်ဂျီးရီးယားနှင့် CRCC4သည်ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသောစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်
Derevenk Viaduct မှမြို့တော်ဝန်Büyükkılıç
Kayseri Transportation Inc. မှMetmetçiğအားကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်သည်။
amo မီမိုလူသည် Sapanca ၏လူများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်
Imamoglu မှတင်ဒါဘူတာသို့ဒုတိယတုံ့ပြန်မှု - 'ငါ Istanbul ကိုယ်စားအရမ်းဒေါသထွက်မိပါတယ်'
IMM သည် Haydarpasa Sirkeci မီးရထားဘူတာတွင်တင်ဒါတင်လိုက်သည်
«	အောက်တိုဘာလ 2019 »
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: UlukışlaBoğazköprüလိုင်းမြေပေါ်ကီလိုမီတာ 88 150 + လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေး
22: အောက်တိုဘာလ 10 30 @ - 11: 30
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Gebze Köseköy signal နှင့်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များအစားထိုးပစ္စည်းထောက်ပံ့ရေးများအတွက်လိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်း
22: အောက်တိုဘာလ 14 30 @ - 15: 30
တင်ဒါအသိပေးချက် - အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်းကိုရရှိမည်
24: အောက်တိုဘာလ 10 00 @ - 11: 00
24: အောက်တိုဘာလ 14 00 @ - 15: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Alınacaktırကို Maintenance နှင့် GSM-R နဲ့ဒီလောက်သေးအောင်လုပ်နိုင်တာ Control Center ကိုစနစ်၏ပြုပြင်
24: အောက်တိုဘာလ 14 30 @ - 15: 30
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: TCDD Afyonkarahisar အလုပ်သမားများဝမ်းစာစားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးဝန်ဆောင်မှုစင်တာကိုသိမ်းယူပါလိမ့်မယ်
Bayındır, တုရု, Ödemişဘူတာလမ်းများFerşiအလုပ်လုပ်၏တင်ဒါရလဒ်
mirzmir ဆိပ်ကမ်းတံတားနှင့် Backfill ဖြည့်
တင်ဒါရလဒ်အကြားHaydarpaşa Ankara လိုင်းကီလိုမီတာ - 392 + 742 - 395 + 700 ဆင်ခြေလျှောအစီအစဉ်
Irmak Zonguldak လိုင်းပေါ်တွင်မီးရထားလမ်းကူးတံတားတည်ဆောက်ခြင်း
အမြင့် Standart Atıldıနှင့်အတူဥရောပမီးရထားကော်နက်ရှင်သည်လက်မှတ်ပေါင်း
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Altepe အခုဆိုရင်ကျနော်တို့မြန်နှုန်းရထားက Metro ဓါတ်ရထား (ဗီဒီယို) မထုတ်လုပ်
Trabzon High-Speed ​​ကိုရထားရထားအရှိန်မြှမည်မဟုတ်
အလွန်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားနူးညံ့ | အလွန်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားအစုံတင်ဒါ၏တူရကီ-Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်း6အရေအတွက်ကဖန်ဆင်းခဲ့သည်
မြန်နှုန်းမြင့်ရထားရထားလမ်းတဏှာအဆုံး Exceeding Bursa ၏တစ်ဝက်တစ်ရာစု,
အခုတော့ Menderes Cumaovasıမဟုတ်
အစ္စတန်ဘူလ်က Metro အတွက်မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်အတူစကားပြောမရှိတော့ဖြစ်နိုင်
ဤရွေ့ကားကတ်များမဟုတ်တော့3ပေါင်ဖြည့်နေကြ
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အောက်တိုဘာလ 19 1898 ဘဂ္ဂဒက်မီးရထားလိုက်လျော ...
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: အောက်တိုဘာလ 18 1898 ıl.wilhelm Hohenzollern နှင့်သူ၏ဇနီး ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အော်တိုမန်စစ်တပ်တွင်အောက်တိုဘာလ 17 1874 ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အော်တိုမန်အင်ပါယာအတွက်အောက်တိုဘာလ 16 1830 ပထမဦးဆုံးမီးရထားလမ်း ...
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (368) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (633) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)
Yandex Driverless Cars 1.6 သည်ကီလိုမီတာသန်းပေါင်းများစွာဖုံးလွှမ်းခဲ့သည်
တူရကီအတွက် BMW ကားစီးရီး Gran Coupe22020 ဧပြီလ
Saygınlarşnşaatသည် Rize-Artvin လေဆိပ်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် Ford Trucks ကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်
Dacia Duster အတွက်မျိုးဆက်သစ်ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်
RayHaber Tube Videos မ
Metro Istanbul မှဝန်ထမ်းများသည်မသန်စွမ်းသူများမိသားစုသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာ
3 ။ International Metrorail Forum ကို Ankara Ato Congresium တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
Konya Metro လေလံရလဒ်
Esenboga လေဆိပ်မှာ Metro လမ်းကြောင်း, စခန်းများနှင့်ပရိုမိုးရှင်းဗီဒီယို
စွန့်ပစ်အဆောက်အဦး Esenler ဘတ်စ်ကားဘူတာထဲမှာဖြိုဖျက်ခဲ့ကြ
Burke ရထားဖြတ်ကျော်ရှိရာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်ဆင်၏ဗီဒီယိုကို heartbreaking ခဲ့သည်
အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်က Metro တွေ့ရှိ 175 ယူရိုသန်းအကြွေး
Hyundai Rotem ကုမ္ပဏီထံမှမှ 213 ဝါဆော Tools များထုတ်လုပ်ရန်ပါလိမ့်မယ်
Osmaniye Düziçi Jolly တောင်တန်း Cableway စီမံကိန်း (အထူးအစီရင်ခံစာ) အတွက်စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး
Siemens နဲ့ Alstom ကုမ္ပဏီများမှတပ်ဖွဲ့များ (အထူးအစီရင်ခံစာ) join
အစ္စတန်ဘူလ် 120 Piece Tool ကိုပစ္စည်းဝယ်ယူရေးရလဒ်များအဘို့အ Metro ရထားစနစ် (အထူးအစီရင်ခံစာ)
ကနေဒါ၏သမိုင်းဝင် Brockville မီးရထားဥမင်လိုဏ်ခေါင်းသည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုဖွင့်သည်
Uadak တွင် Anadolu DMU National Train Set စတင်စမ်းသပ်မောင်းနှင်မှုစတင်ခဲ့သည်
Expo Ferroviaria 2019 Fair သည်အီတလီနိုင်ငံ၊ မီလန်မြို့၌ကျင်းပခဲ့သည်
ထင်းရူး Grove ရထား Met ပြတိုက်အတွက်ကလေးများ Demiryolc Group မှ
3 ။ အဆိုပါ Izmir ဂလားပင်လယ်အော်ရွက်လွှင့်လူမျိုးပွဲတော်နှင့်အတူ Start
Metro သည်ကုမ္ပဏီ Mersin နှင့်အတူပဏာမအင်တာဗျူးစတင်
Bursa T2 ဓါတ်ရထားလိုင်းစခန်းများ, မြေပုံနှင့်ပရိုမိုးရှင်းဗီဒီယို
ဘယ်အချိန်မှာ Mersin မှမြေအောက်အရာ? Mersin မီထရိုလိုင်းမလွန်ကြမည်နည်း
Mersin နှင့်မြေအောက်ရထားစီမံကိန်း Mersin မြေအောက်ရထားမြေပုံ
မီးရထားကဏ္ading ဦး ဆောင်သည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများသည်ကိယက်ဗ်မြို့တွင်စုရုံးခဲ့ကြသည်
Ankara ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအရေအတွက် TCDD ပြောင်းလဲနေသည်!
Porsuk Stream ပေါ်ရှိတံတားများသည်ပန်းချီကားများဖြစ်သည်
Gömeç Dursunlu တံတားကိုအသုံးပြုခဲ့သည်
Country Country Icon စီမံကိန်းများ
ထိုအချိန်ကာလ၏ Bosphorus တံတားနှင့်အဝေးပြေးခွန်ကောက်ရာခိုင်နှုန်းကို 20
တံတား meleti အခြားရွေးချယ်စရာလုပ်ငန်း Continues အခါတံတားပေါ်တွင်တည်ဆောက်
1915 Canakkale တံတားဒေသတွင်းတံဆိပ်ခေါင်းရိုက်နေသည်
အမေရိကန်ပြီးနောက်တူရကီအတွက် Register လုပ်ဖို့ triple Track လျှောက်လွှာ
2 ပေါင်းထောင်နှင့်ချီသောသူများသည် Istanbul လေဆိပ်တွင်စာဖတ်သူများနှင့်တွေ့ဆုံမည်
DHMİ9သည်လစဉ်ကိန်းဂဏန်းများကိုကြေငြာခဲ့သည်။
အစ္စတန်ဘူလ် Metrobus ဘူတာမြေပုံ
အစ္စတန်ဘူလ်က Metro နှင့်မီထရိုလိုင်းဘူတာအမည်များ၏ Metrobus Metrobus ဘူတာ
လမ်းကြောင်း Duration: အပေါ်ကျောက်ခေတ် Bagcilar လမ်းရထားမှတ်တိုင်
ဆောင်းပါးများ RSS ကို